अन्तिम ओभरको ४ बलमा ६ रन बनाउन चुक्दा भारत पराजित - Everest Dainik - News from Nepal
अन्तिम ओभरको ४ बलमा ६ रन बनाउन चुक्दा भारत पराजित
कोलकाता, माघ १० । इङ्ल्यान्डले भारतविरूद्धको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय ५ रनले जितेको छ। निकै रोमाञ्चक यस खेलमा इङ्ल्यान्डले दिएको ३ सय २२ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा भारतलाई अन्तिम ओभरमा १६ रन आवश्यक थियो।
भारतका युवा ब्याट्सम्यान केदार जाधवले क्रिस वोक्सको पहिलो बलमा छक्का र दोस्रो बलमा चौका प्रहार गर्दै खेललाई जीत नजिक पुर्याएका थिए । तर, अन्तिम ४ बलमा जितका लागि चाहिने ६ रन बनाउँन नसक्दा भारत पराजित भएको हो । जाधव वोक्सको तेस्रो र चौथो बलमा रन बनाउन असफल भए। पाँचौ बलमा उनले डिप प्वान्टमा बिलिङ्सलाई क्याच दिएपछि खेलमा भारत हावी हुन सकेन ।
याे पनि पढ्नुस भारतले अनौठो कीर्तिमान राख्न सक्ने सम्भावना, किपिङ पो कसले गर्ला?
याे पनि पढ्नुस मोदी राज फर्केसँगै भारतीय क्रिकेट टीमको जर्सी पनि जोगी रङ्गको हुने
यसअघि टस जितेर इङ्ल्यान्डलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको भारतले राम्रो बलिङ गर्न सकेन्। इङ्ल्यान्डले ८ विकेटको क्षतिमा ३ सय २१ रन बनायो। इङ्ल्यान्डको जितमा जासन रोयले ६५, जोनी बेरिस्टोउले ५६ र बेन स्टोक्सले ३७ बलमा बिस्फोटक ५७ रन बनाएका थिए। भारतविरूद्ध ३ विकेट पनि लिएका स्टोक्स ‘म्यान अफ दि म्याच’ घोषित भए।
याे पनि पढ्नुस इंग्ल्याण्डमाथि भारतको शानदार जित, कुलदीप र रोहितकाे किर्तीमानी प्रदर्शन !
ट्याग्स: india cricket, india- england cricket, India-vs-England-3rd-ODI